"उनको पौरख–देशको गौरव" :: Press Chautari ::
"उनको पौरख–देशको गौरव"
-प्रशान एलुङ्ग राई
के चोक्टा खानेहरुको मात्रै हो र देश ?
अहँ, हुँदै होइन । देश त झोल मात्रै पिउनेहरुको पो बढि हो त । जसले त्यो देशको लागि रगत–पसिना बगाए । तर जसको साहस र वीरताले त्यो देशको चिनारी संसारभर फैलियो तिनका जिन्दगी चाँहि सधैं दुःख र अभावमै ? ढुसी परेका आश्वसन र सपना बाँड्दै जहिले पनि चोक्टा खाएर मोटाउनेहरु सधै भन्ने गर्छ–“तिमीहरु राष्ट्रका गहना हौं” । यसपालीको समय सन्दर्भमा त्यसरी झोल मात्रै पिउदै संसारभर देशको झण्डा बोकेर नेपाल र नेपालीको परिचय बाँडदै हिडेका साहसिक खेलाडीहरुको विम्व अक्षरहरुमा खोतल्ने प्रयास ।
बैकुण्ठ मानन्धर कति कुदे होलान ? लाग्छ उनले कुँदेको दुरी जोड्ने हो भने पुरै नेपाललाई फनफनी बेरेर छिमेकी देशलाई समेत घेर्न पुग्दो हो । आज सम्म पनि कुँदी रहेछन् बैकुण्ठ मानन्धर । अनि कुँदीरहनेछन । सायद त्यत्तिबेला मात्रै टक्क अडिने छन् उनी, जब अन्तिम पल्ट फतक्कै गल्छन् । कहिल्यै नउठ्ने गरी बर्लङ्गै ढल्छन् । अनि त्यत्तिबेला उनी एकै चोटी बिसाउने छन् जत्तीबेला उनी बैकुण्ठ बास बस्छन् । जसले देशको लागि उमेर, बैंश र सम्पूर्ण जीवन दिए । उनी देशका साच्चीकैको गहना हुँदो हुन त यो बुढेसकालमा त्यो टहरामुनी किन तरकारी बेच्नु पथ्र्याे होला र ? उनलाई देशले गहना बनाएर लगाउन सकेको भए कति सुहाउँदिलो देखिदो हो हाम्रो देश ...।
देश–विदेशमा सयौं बैकुण्ठ मानन्धरहरु छन् जसले देशको लागि तिनका नशा नशामा रगत बगुन्जेल दौडी रहे, खेली रहे । तिनलाई राष्ट्रले सामान्य जीवन धान्नको निम्ति सिन्को समेत भाँच्न सकेको छैन । खै कहिले तिर्ने तिनले त्यो देशमाथि लगाएको गुन ? के यो कुनै पनि राष्ट्रको दायित्व भित्र पर्दैन र ? यदि होइन भने भन्न छोडी देऊ उनीहरुलाई –“खेलाडीहरु राष्ट्रका गहना हुन्” । र भन “उन्मत्त जवानीमा कुरकुरे बैंस बिसाउन मैदान रोज्यो, रंगशाला रोज्यो र अहिले विगत धिक्कार्छौ ?”
हो, तिनले देशकै इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि जीवनको सबैभन्दा बढि उर्जाशील समय खेलेर बिताए । देशको झण्डा बोकेर देशकै परिचय संसारको कुना कुनामा पुगेर बाँडे । त्यस्ता सयौं राष्ट्रका सपूतहरु छन् जसले देशकै लागि खेलेरै हड्डि मक्काए । आज उनीहरुको घाउमा न मल्हम छ न कुनै सहानुभूति । खोई ? तिनले रगत–पसिनासरी देशको प्रतिष्ठा उँचो बनाउँदै खेलेर थुपारेको मेडल र प्रमाणपत्र कुन हाकिमको दराजमा ढूँसी पलाई सक्यो कुन्नि ? अझ राज्य बासी चना र सुख्खा केराउ चटाएर तिनैबाट ठूलो अनि अग्लो मेडलको आस गर्छ । सरम मान्दैन राज्य र खेल क्षेत्रका अधिकारीहरु अनि हिसाब गर्छ–“खेल क्षेत्रको लागि यत्रो लगानी गरेका छौं ।”
आज पर्यान्त ति देशकै परिचय बाँड्दै संसारका कुना कुनामा पुगेर देशको प्रतिष्ठा बढाउनेहरु आफ्नो कर्ममा अलिकति पनि पछि छैनन् । अनि त यत्रो विशाल अमेरिकाको ठाउँ–ठाउँमा नेपाली जातिकै परिचय छातीमा टाँसेर खेलीरहेकाछन्–खेलाईरहेकाछन् । अभैm थाकेका छैनन् विधान लामा, राजकुमार राई, किशोर श्रेष्ठहरु । अह गलेका छैनन् सम्बर गोले, सविता राजभण्डारी, सिता राई र विना लामा खड्काहरु । यी त केवल प्रतिनिधि नाम मात्र हुन् । यो कोलम्बसले भस्मे फाँडेर बस्ती बसाएको अमेरिकामा सयौं यस्ता खेलाडीहरुछन् जसले आपूmले जानेको सीप र कला बाँड्दै हिडेका छन् । तीनैका साहस र कामको लागि स्याबासी दिदै साथ र समर्थन स्वारुप धाप मार्न पुग्छन् थानेश्वर राईहरु... ।
उता देशमा बैकुण्ठ मानन्धरहरु त कति छन् कति ?
आशा गरौं राज्यले यस्ता सपूतहरुको सम्मान र तिनका योगदानको कदर गरोस् । जन–जनको अपेक्षा यहि ।
मंगलवार, २०७० पुस २९ गते ०७:४४ / Tuesday, Jan 14, 2014 7:44 am